कर्पोरेट नेपाल , १३ माघ २०७६, सोमबार, १०:०४ am
काठमाडौं । यतिबेला दैलेखका पहाडमा पेट्रोलियम पदार्थ खोज्न दर्जनौं राता मान्छे खटिएका छन् । रातो ज्याकेट र रातै ट्राउजर लगाएका उनीहरु फौजी मान्छे भने होइनन् उनीहरु पेट्रोलियम अन्वेषणका प्राबिधिक टोली हुन् ।तिमध्ये ५० जना चिनियाँ छन् भने आधा दर्जन नेपाली छन् । दुबै टोलीमा प्राबिधिक र गैर प्राविधिक गरि एक सय जना भन्दा बढी पहाड प्वाल पार्न क्रियाशिल छन् ।
पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख सुधिर रजौरेका अनुसार हाल सेस्मिक सर्भेको काम धमाधम भैरहेको छ । यसले ड्रिलिङ गर्ने उपयुक्त ठाउँ फेला पार्न सघाउँछ । जहाँबाट ४.५ किलोमिटर गहिरो ड्रिलिङ गरिनेछ । र पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणको अवस्था पत्ता लगाएर मूल्यांकन गर्न सकिनेछ । म्याग्नेटेलोरिक सर्भे भने सम्पन्न गरिसकिएको छ । उनले दैलेखका पहाडमा कति इन्धन छ भन्ने तथ्य पत्ता लगाउन अझै २ वर्ष धैर्यताका साथ कुर्नुपर्ने पनि बताए ।
दैलेख अन्वेषणको चाईना जिओलोजिकल सर्भेका तर्फबाट प्रा.डा. टान फुयेनले गरिरहेका छन् । २ वर्षभत्र अन्वेषणको काम सम्पन्न गरेपछि थप ६ महिनामा आर्थिक सम्भाव्यताको खोजी गर्न समय लाग्नेछ । आगामी अढाई महिनामा यो काम सम्पन्न गरेपछि ४ महिना लगाएर त्यसको प्रतिवेदन तयार हुनेछ । र सोही प्रतिवेदनका आधारमा आगामी दशैंतिर ड्रिलिङ गरिने पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना प्रमुख रजौरेले जानकारी दिए ।
नेपालका तर्फबाट खानी विभागका महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटा र चीनका तर्फबाट चाइना जिओलोजिकल सर्भेका भाइस प्रेसिडेन्ट डा. वाङ कुनले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यस अघि पनि चाइना जिओलोजिकल सर्भेको टोलीले सन २०१६ को अप्रिल ३० मा नेपाल आएर सुर्खेत दैलेख, बुटवल पाल्पा र चतरा बराह क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम खानीको संभाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।